Famous Theaters mu Europe dziri yakarukwa chinokosha European tsika. Famous dzemitambo mu Europe anovimbisa imi zvesimba anoshamisa. It achasiya iwe vakamutsa, kufamba, uye spellbound! Hunhu kuita unyanzvi hupfupi zvinhu uye anokura spectacularly. kupenya aya uchenjeri kurarama chete mundangariro dzedu. Famous dzemitambo mu Europe kusika pfungwa exclusivity uye husiri nyore kuwana. Zviri kwenguva duku nokuitawo nguva, uye uchada patinodziya mushana, patinoravira chiedza chawo sokupenya.
Vazhinji vaimbi zvikuru kare, pamusoro okupedzisira mazana maviri nemakore, makachengeta pano. operas zhinji wakakurumbira vakambova kugadzirwa wavo wokutanga pano akadai Othello, Nabucco naVerdi, uye Madame Butterfly naGiacomo Puccini.
The Globe Theater rinozivikanwa Shakespeare Globe. Usingagoni kuguta Fans The Bard anofanira kushanyira ichi yemitambo yakakurumbira Europe. Mabasa William Shakespeare zvinoratidza kunzwisisa zvakaita vanhu zvakadzama. basa captivates ake nevaimuteerera. Kukunda kwake mutauro Chirungu akaita mitambo ake uye nhetembo isingachinji zvimedu shasha.
Iyo Paradis Latin ndeyechino kuuya cabaret ndiye mutsivi weiyo yekutanga Latin Theatre. The Latin Theater paakatumwa Pakutanga nokuda mumwe kupfuura Napoleon Bonaparte ari 1800s.
The Volkstheater muVienna ari akanaka pameso kuti tarisai. Kutanga yakavhurwa 1889. Iyo ndeimwe yemhando yakakura kwazvo pasi rose munyika dzinotaura chiGerman uye inofanirwa-kuona.
Unoda embed yedu Blog romukova “5 Famous Theaters In Europe” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/famous-theatres-europe/?lang=sn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)